လင်းငယ်၏ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်: အတိတ်ရဲ့ တံခါး တချပ်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း
အတိတ်ရဲ့ တံခါး တချပ်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း
"ငါချစ်ရမှာ စိတ်ကူးရုံနဲ့ အသွေးအသားထဲက ပျော်နေတတ်ပြီ မင်းရဲ့ ရှေ့ကို ရောက်သွားရင်လည်းအားတင်း ထားသမျှအရည်ပျော်သွားတယ်" ဆိုတဲ့ ၀ိုင်းဝိုင်းရဲ့ သီချင်းလေးကို နားထောင် နေရင်းနဲ့ အတွေးတွေက အတိတ်ကို ပြန်လှည့်သွားတယ်။
ငယ်ရွယ်တုန်းကပေါ့..... သူငယ်ချင်းလို့လည်း ပြောလို့ ရတဲ့ အစ်မလို့လည်းပြောလို့ ရတဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ အစ်မတစ်ယောက် ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ ကျောင်းမှာလည်း အမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်။ ကျူရှင်မှာလည်း တွေ့နေရတယ် ဆိုတော့ သူကို စိတ်ထဲမှာ စွဲလမ်းမိတယ်။ သူကလည်း လူတကာချစ်ဖို့ ကောင်းလောက်အောင် ချောတာကိုး။ ကိုယ့် စိတ်ထဲမှာ သူ့ကို ချစ်သူတစ်ယောက် အဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့တယ်။ လူတွေအမြင်မှာလည်း ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကို ချစ်သူတွေအဖြစ်ထင်အောင် ကြိုးစားချင်ခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်းမုန့်စားတန်းမှာ သူနဲ့ ဆုံတယ်။ ဆုံတိုင်းလည်း ရင်တွေတဒိန်းဒိန်း ခုန်ခဲ့တယ်။ ငယ်ရွယ်ပေမယ့် ဇမသေးတဲ့ ကိုယ် သူနဲ့ တွေတိုင်း ကတုန်ကရင်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သူက အမြဲတမ်း မုန့်ဈေးတမ်း မှာ မုန့်တွေကိုယ့်ကို ၀ယ်ကျွေးတယ်။ မောင်လေး မောင်လေးဆိုပြီး ကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံတတ်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ သူ့ကို " မ " လို့ တစ်လုံးတည်းခေါ်တတ်တယ်။ ကိုယ်သူ့ကို မလို့ ခေါ်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေတိုင်းမှာ ကိုယ့်မျက်ဝန်းမှာ အချစ်ရဲ့ အရိပ်တွေ စွန်းထင်းနေခဲ့မိလားမသိဘူး။ သူမကို ကိုယ်ဖွင့်ပြောမယ်လို့ ကြိုးစားတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်သူမမှာ ချစ်သူရည်စား ရှိမရှိစုံစမ်းခဲ့ရတယ်လေ။ သူမကပဲ လျိူ့ဝှက်ခဲ့တာလား... သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကပဲ သူမအတွက်လိမ်ညာပေးခဲ့တာလား မသိပဲနဲ့ သူမမှာချစ်သူ ရည်စားမရှိဘူးလို့ ကိုယ်သိခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်သွားခဲ့မိတယ်။ ကိုယ်က ကျောင်းမှာဆို နေရာတကာ ဆရာကြီးဝင်လုပ်တတ်တယ်လေ။ ကျောင်းကပွဲ ဆိုလည်း ကိုယ်ပါတယ်။ ကျောင်းရဲ့ ကထိန်ဆိုလည်း ကိုယ်ကခေါင်းဆောင် ကျောင်းရဲ့ ပွကြီးပေ့ါ။ နောက်ပြီး ကျောင်းရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့.. ကောင်မလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်မှုအများဆုံးမှာ ကိုယ်က နံပါတ်တစ်ကို ချိတ်ခဲ့တယ်။ ဆရာ၊ဆရာမတွေ အားလုံးက ကိုယ့်ကို တာရာပွကြီးတဲ့။ ကိုယ်တို့ ကျောင်းမှာ နှစ်တစ်နှစ် ကျောင်းကပွဲလုပ်တော့ အစီအစဉ်တစ်ခု အတွက် ကိုယ်က ခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီး ပါရတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ သူမနဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီးသလို ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ တကယ့်ကို သာယာမှုနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။ ကိုယ့် အတွက် ကံကြမ္မာဆိုးလို့ မတွေးမိခဲ့တာ ကိုယ့်အမှားပဲ ထင်တယ်။ ကိုယ်ကျောင်းကပွဲအတွက် အစီအစဉ်ကို ဇာတ်တိုက်တိုင်း သူမကလည်း အဲ့ဒီနေရာကို လာနေခဲ့တတ်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့် အတွက် မုန့်တွေ အအေးတွေဝယ်လာပေးခဲ့တတ်တယ်။ ကိုယ့်ရင်မှာ ကြည်နူးရတယ်။ သူမကို ဖွင့်ပြောဖို့ ကိစ္စလည်း တစ်ခါတည်း စဉ်းစားထားတာနဲ့ တရက်တော့ ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။ သူမက အဖြေကို မပေးခဲ့ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းခေါ်နေတတ်တဲ့ မောင်လေး ဆိုတာကို လေး ဖြုတ်ပြီး မောင်လို့ ပြောင်းခေါ်ခဲ့တော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သူမကိုယ့်ကို လက်ခံပြီလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။ ကျောင်းကပွဲ အချိန်တွေက အပျော်ဆုံးပါပဲ။ သူမက ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းထဲက လူလေးသေးသေးလေးနဲ့ အသားမည်းမည်းလေး ဇော်မင်းသန့် ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းကို နောက်ကျပြောကျရင်း သူက ဇော်မင်းသန့်က ငါနဲ့မောင်ရဲ့ သားလေး ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ရယ်နေတဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ကြည်နူးခဲ့တယ်။
ဒါတွေအားလုံးဟာ ကျောင်းကပွဲပြီးလို့ တစ်ပတ်လောက်မှာပဲ ကိုယ့်ဘ၀ထဲက အပြီးအပိုင်ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့တယ်။ တနေ့ မနက်ဘက်အစောကြီး နိုးနေလို့ ကိုယ်ကျောင်းကို အစောကြီးထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာပေါ့..
ကိုယ် ကျောင်းပေါက်ဝကနေ သူ့ကို စ ဖို့ အတွက် စောင့်နေမိခဲ့တယ်။ မထင်မှတ်ထားခဲ့ပါဘူး။ သူ့မကျောင်းကို လမ်းလျှောက်လာနေတာကို တွေလိုက်တယ်။ ပျော်သွားမိတယ် ဒါပေမယ့် သူမလက်တွဲပြီးလမ်းလျှောက် လာတဲ့သူက သူမ အခန်းထဲက သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်လေ။ ကိုယ်သိလိုက်ပါတယ် ကိုယ်ညာခံလိုက် ရပြီလို့။ ကိုယ်ချာခနည်းနေအောင် လှည့်ထွက်သွားလိုက်တယ် ကျောင်းထဲကိုပေါ့။ ကိုယ်ထွက်သွား လိုက်တာကို ကျောင်းနားရောက်နေတဲ့ သူမက လှမ်းတွေ့လိုက်တယ်လေ။ သူမမျက်နှာမှာ အံ့အားသင့်တဲ့ အမူအရာကိုကိုယ့်ရဲ့ မျက်ဝန်းထောင်စွန်းကနေ ဖျတ်ခနဲတွေ လိုက်ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မုန့်စားကျောင်း ဆင်းတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ သူရဲ့ ချစ်သူလို့ ကိုယ်ထင်ခဲ့တဲ့လူ ကိုယ့်ဆီရောက်လာခဲ့တယ်။ သူတော့ပါမလာပါဘူး။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဲ့ဒီလူက ကိုယ့်ကိုရှင်းပြကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နားမထောင်ချင် ခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီအဖြစ်ကို အိမ်မက်လို့ ထင်ချင်တယ်။ သူတို့က ကိုယ့်ကို ပြောပြကြတယ်။ သူမက ရည်းစားနဲ့ စိတ်ကောင်နေတဲ့ အချိန်မို့ ကိုယ့်ကို သူမရည်စား သ၀န်တိုအောင် တမင်တွဲပြခဲ့တယ်တဲ့။ ပြီးတော့ အခုသူမ ရည်စားနဲ့ အဆင်ပြေတော့ ကိုယ့်ကို သူမမှားပါတယ် လို့ လာပြီး တောင်းပန်ခိုင်းတာပါတဲ့။ သူမကိုယ်တိုင်တော့ မပါလာခဲ့ဘူးလေ။ ကိုယ့်ဘ၀မှာ မိန်းမတစ်ယောက် ကို ချစ်မိခဲ့လို့ ခံစားခဲ့ရတယ် ပြီးတော့ ၀မ်းနည်းခဲ့ရတယ် ရှက်ခဲ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ်သူမကို စိတ်နာနာနဲ့ တခြားမိန်းကလေးတွေကို ပျော်တမ်းတွဲပြီး အသည်းလိုက်ခွဲခဲ့မိတယ်။ ဒါကိုယ်မှားလား? ပြောကြပါ။ အခုတော့ ကိုယ်လည်း စိတ်ကုန်လို့ အဲ့ဒီဘ၀ကြီးထဲက ရုန်းထွက်ခဲ့တာ ၃ နှစ်တောင် ကျော်ရောပေါ့................
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 9:43 PM
မယ်ကိုး August 22, 2009 at 6:16 PM
ကိုယ်တွေဖြစ်လည်း စာရေးကောင်းတာတော့ တကယ်ပါ
မေဇင် August 22, 2009 at 9:43 PM
မှားတာပေါ့.....သူ့ ကိုမကျေနပ် ၇င် သူ့ အသည်းကိုပဲ ပြန်ခွဲပေါ့ ... တစ်ခြားမိန်းကလေး တွေရဲ့ အသည်းကို ခွဲစရာလား...း))... ရုန်းထွက်ခဲ့ပြီ ဆိုတော့လဲ.... ပြီးတာပါပဲလေ နော်....း)
Anonymous August 23, 2009 at 3:54 PM
ပုံပြင်ဆန်ပေးမယ့် နာကျည်းစရာကောင်းတဲ့ အတိတ်တစ်ခုပါလား ...
Anonymous August 24, 2009 at 1:02 PM
Anonymous March 30, 2010 at 9:11 PM
sorry! whts tat song name? >"ငါချစ်ရမှာ စိတ်ကူးရုံနဲ့ အသွေးအသားထဲက ပျော်နေတတ်ပြီ မင်းရဲ့ ရှေ့ကို ရောက်သွားရင်လည်းအားတင်း ထားသမျှအရည်ပျော်သွားတယ်"<
လူကြီးလား ဒါမှမဟုတ် ကလေးအိုလား?
မိုးရာသီ နှင့် ဖိနပ်တစ်ရံ